Soomaalida Göteborg oo toddobaadkii labaad dhaqaale u arruurineya abaaraha ka jira Soomaaliya | Somaliska
Iyadoo dalka Soomaaliya uu xilligan haleeshay abaar tii ugu xumeyd Qarammadda Midoobey ay ka soo saartay qeylo dhaan, ayaa hadana waxaa soomaalida caalamka ku dhaqani ay u istaageen siddii ay ugu gurman lahaayeen walaalahood ay abaarta saameeysay.
Soomaalida Iswiidhan gaar oo ka mid ah qurbo joogtaasi, ayaa waxaa xalay magaaladda Göteborg ee caasimaddaku qabteen barnaamij dhaqaalo loogu arruurinayey abaaraha. Xaafadda Biskopsgården oo ay soomaali badan dagan tahay ayaa barnaamij weyn oo ay ka soo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee bulshadda ku qabteen hoolka Sjumila hallen. Dadkii barnaamijkaasi ka qeyb galay ayaa waxaa ka mid aheyd Maj Karlsson oo ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dalka Iswiidhan islamarkaasina ka mid ah xisbiga garabka biddix ee vänster partiet-ka.
Qudbad gaaban oo ay ka jeedisay madasha ayey sheegtay sideey uga muransan tahay xaaladda dadka ay abaaraha saameeyeen, waxaana ay tilmaantay ineey la qeybsaneeyso dareenka culus soomaalida isku xil qaantay ineey garab istaagaan walaalahood. Sidoo kalena ay gaarsiin doonto asxaabta xisbigeeda baaqa ah ineey taakuleeyaan dadka ay abaaraha wax yeeleeyeen.
Dhinaca kale imaam-ka magaaladda Göteborg Sheekh Cabdirashiid oo isagana meesha hadal qiimo leh ka jeediyey ayaa sheegay ineey tahay arrin waajib ku ah qof kasta oo soomaali ah inuu gacan ka geeysto taakuleynta dadka abaaraha saameeyey. Diinta Islaamka-na ay fareeyso in la is gacan qabto. Odey Cosoble oo ka mid ah odeyaasha xaafadda oo isagana dhiniciisa ka hadlay ayaa sheegay in abaartan maanta Soomaaliya saameeysay eeysan aheyn middii ugu horeeysay, balse ay tahay mid soo laa laabatay xilli ay ummaddu liidato jirina dowlad u gurman karta dadka siddii dowladii meleteriga aheyd oo abaartii Dabo dheer sameeysay qorshe ay ku samata bixisay dadyowgii abaarta wax yeeleeysay.
Intuu uu socday barnaamijkan ayaa kooxda Hiddaha iyo dhaqanka waxaa ay ku soo bandhigeen riwaayad ka hadleeysa aabaraha iyo sidda ay dadka qaarkiis ula socon kana dareeen la’yihiin. Sacdiyo Xuseen (Sacdiyo Soomaali) oo ka mid aheyd faniintii kooxda Heegan oo riwaadaas fikirkeeda laheyd ayaa u sheegtay Somaliska.com ujeeda ay u sameeystay,in ay tahay siddii ay ugu baraarujin laheyd dhalinyaradda ineey gacan u fidiyaan walaahood ay abaartu dhibaateeysay.ku baraarujineeysay dadka.
Dhinaca kale ayaa toddobaadkii hore waxaa barnaamijkaas mid la mid ah lugu qabtay xaafadda Hammarkullen ee Angered, kaas oo ay dadweyne faro badan ka soo qeyb galeen. Barnaamijkan lugu taakuleeynayo abaaraha Soomaaliya, ayaa ah kii labaad oo ay soomaalida Göteborg sameeyo. Iyadoo dhinaca kalena ay dhalinyaradda soomaaliyeed ee Göteborg geestooda ka wadaan qaban qaabada arruurinta dhaqaalo kale oo lugu taakuleeyo dadka soomaaliyeed ee abaaraha saameeysay.
Dalalka geeska Afrika ku yaala oo ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa waxaa ka jira abaaro tii ugu xumeyd ee muddo lixdan sanno ka hor ugu dambeeysay caalamka sidda ay Qarammadda Midoobey sheegtay. Abaartan ayaa dadka iyo duunyada galaaftay.
Wax xaafadan degen oo soomaali sax ah maan arag ruunta xaafadan waa laqaseey waxa walaageyna qeeyb ee kayahiin dadka aad meshaan magacoodo kuso qorteen. Shiikh cabdirashiid mahee halaha kale waa amxaaro lajir